Gonzalo Higuain Oo Ka Sii Socda Chelsea & Blues Oo Kansalaysa Heshiiskiisa Amaahda Ah – Wararka Ciyaaraha Maanta
Gonzalo Higuain Oo Ka Sii Socda Chelsea & Blues Oo Kansalaysa Heshiiskiisa Amaahda Ah
Mustaqbalka Gonzalo Higuain ee kooxda chelsea ayaa u muuqda mid soo dhamaaday kadib markii uu ku fashilmay in uu wax saamayn ah ku yeesho kooxda Maurizio Sarri kadib markii uu amaah ugaga soo biiray kooxda Juventus.
Waxa ay u muuqataa in ay kooxda chelsea soo afjarayso heshiiska amaahda ah ee ay kooxda chelsea kula soo wareegtay suuqii Janaury markii uu joogay kooxda Ac Milan iyada oo lagu soo waramayo in ay chelsea dib ugu dirayso kooxda chelsea dhaamadka xilli ciyaareedkan.
Wargayska Gazzetta dello Sport ayaa sheegaya in ay lama huraan tahay in ay kooxda chelsea kansali doonto heshiiska amaahda ah ee Higuain dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Wargayska Daily Mail ayaa sii raaciyay in Olivier Giroud loo dalici doono kaydka 1-aad ee kooxda chesea hadii uu Higuain ka tago kooxda chelsea dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Higuain ayaa ku dhibaatooday kooxda Chelsea tan ilaa markii uu ku soo biiray suuqii January isaga oo kaliya kooxda u dhaliyay 3 gool xilli uu Tababare Sarri u muuqdo mid ka kalsoon baxay xiddiga kadib markii uu Hazard ku soo celiyay in uu ka ciyaarsiiyo weerarka tooska ah ee kooxdiisa.
Heshiiska uu ay chelsea kula soo wareegtya xiddiga ayuu ka mid ahaa in ay si toos ah ula wareegto hadii uu xiddigu ka soo boxo shardiyo gaar ah oo ku xidhnaa heshiiskiisa amaahda ah.